मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा गलत नहुने, ओलीले राम नेपालका हुन् भन्दा गलत हुने? – Gandaki Chhadke Nepal
July 15, 2020 News DeskLeaveaComment on मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा गलत नहुने, ओलीले राम नेपालका हुन् भन्दा गलत हुने?
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीरामको जन्मभूमी अयोध्या नेपालमै पर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केहिले ओलीको यस किसिमको अभिव्यक्तिले नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिगार्ने बताइरहेका छन् भने केहिले ओलीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै वास्तविकता बारे अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
ओलीको यस अभिव्यक्ति बारे भारतमा विरोध भैरहेको छ। यता नेपालका विभिन्न राजनीतिक नेताहरुले पनि ओलीको आलोचना गरिरहेका छन्। तर, केहि भने ओलीले भने जस्तै अयोध्या नेपालमै पर्ने तथ्यहरु भेटिन सक्ने बताउँछन्।यस विषयमा टिप्पणी गर्दै ग्रेटरनेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल ओलीको विरोध गरिनु गलत हुन जाने बताउँछन्। ओलीको उल्लिबिल्ली उडाउनु भन्दा ठोरी गएर अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ।
केपी शर्मा ओलीले अयोध्या वीरगन्जदेखि पश्चिममा पर्छ र राम नेपालका छोरा हुन् भन्दा उनलाई उल्लिबिल्ली पारिँदै छ । हामीलाई ओली महोदयको यो कुरा नयाँ लाग्नु स्वाभाविक हो । ठोरी गएर अध्ययन गरौँ न भन्नुभन्दा पनि हामीलाई ओली महोदयले अन्टसन्ट कुरा गरेर कालापानीको मुद्दालाई कमजोर पारे भनेर गफ हाँक्न रमाइलो लागेजस्तो छ ।नेपाल आफ्नो धारणा फेसबुकमा राख्छन्। ओलीले अयोध्याको दाबी गरेर भारतसँग यु-द्धको नयाँ मोर्चा खोलेको उनको तर्क छ।
फणिन्द्र नेपाल फेसबुकमा यसो लेख्छन् –नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्दा मैले कतिपय नेपालीको मुखबाट सुनेको थिएँ ,ठिकै हो , बुद्ध नेपालमा कति नै बसे र ! दरबारबाट निस्किएपछि त उता दक्षिणतिरै सबै ज्ञानगुन प्राप्त भएको हो ।तर तिनीहरूले सजिलै भुलिदिए , दरबार त नेपालमै थियो ।
भारतले कूटनीतिक पहलको ग~म्भीरता बुझेन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली